वाम गठबन्धनको आडमा चुनाव जित्ने पन्तको धम्की,अबदेखि नेपालमा निर्वाचन नगर्ने ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए, आइसिसि) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्तले अब एनआरएनएको निर्वाचन नेपालमा नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । नवौँ बिश्व सम्मेलन तथा निर्वाचन कार्यक्रमका क्रममा एनआरएनएका सदस्यको अभद्र व्यवहारसहित हुलदंगा र भद्रगोल गतिविधिको तीव्र आलोचना भएपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष पन्तले नेपालमा निर्वाचन नगर्ने कठोर निर्णय सुनाउनुभएको हो ।
गैर राजनीतिक संस्था एनआरएनएमा होटलको कोठा–कोठमा आएर राजनीति गर्ने प्रयास भएको दृष्यले आफूहरुलाई यस्तो निर्णयमा पुर्याएको अध्यक्ष पन्तको भनाई छ । निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका एक दर्जन बढी नेताहरु होटल हायातमै डेरा जमाएर बस्नुभएको थियो । अध्यक्ष पन्तले यसी दृष्यलाई संकेत गर्नुभएको हो ।
कुल आचार्यले लगाए गम्भीर आरोप
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा थोरै मतले पराजित हुनुभएका कुल आचार्यले फर्जी मतदाताको कारण आफूले हार बेहोरेको भन्दै एनआरएनए सचिवालयमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ । पराजयसँग आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आचार्यले आफूलाई मतदाताको कारण नभई धाँधली गरेर हराइएको हारोप लगाउनु भएको छ ।
यस्तो छ आचार्यको भनाई
गैर आवासीय नेपाली संघको काठमाडौँमा सम्पन्न नवौं विश्व सम्मेलनमा मलाई साथ, सहयोग र समर्थन दिनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय मतदाता, प्रतिनिधि, अग्रजहरु, शुभेच्छुक संघसंस्थालगायत मिडियाका मित्रहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईंहरु सबैको स्नेह पाउँदा म अत्यन्त खुसी छु र आफुलाई भाग्यमानी ठानेको छु । मैले १५ वर्षको उमेरमा श्रद्धेय पिताजीलाई गुमाएँ । मेरा मातापिताको सामाजिक भावनाबाट प्रेरित भएर सामाजिक कामको शुरुवात गरें । एनआरएनए साँच्चै दुःख परेका तथा देश बाहिर बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सेवा गर्ने संस्था हो भनेर अरु कतै नलागीकन काम शुरु गरें ।
गएको १२ वर्ष देखि निरन्तर संघमा काम गर्दैगर्दा संसारभरी रहनु भएका साथीहरुको माया ममता पाएँ । धेरै सिक्ने मौका पाएँ । सिकेर केही गर्ने प्रयत्न पनि गरें । फलस्वरूप एनआरएनएको केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म पुगें । मेरो काम देखेर आदरणीय अग्रजहरु तथा संसारभरीका साथीहरुले मलाई प्रोत्साहन दिनुभयो ।
सबैको आग्रहलाई स्वीकार्दै मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरें । जब निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भयो, एनसीसी बेलायतमै विवाद उत्पन्न गर्ने प्रयास गरियो । सो विवाद मिलाएर काठमाडौँ आउंदै गर्दा सचिवालयको अनियमितता देखेर दुःख लाग्यो । संधै सबै कामहरु रातरात अनियमित रुपले अगाडि बढाइयो । सदस्यता रजिस्ट्रेशनमा चरम अनियमितता गरिएको जगजाहेर गर्न चाहन्छु । नियमसंगत हुनुपर्ने कामहरुमा पनि अनुनय विनय गर्नुपर्ने अवस्था आयो । फेरि पनि संस्थाको बृहत हितलाई ध्यानमा राखेर मैले संयम अपनाएँ ।
अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन नगरिकनै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने काम गरियो । धेरै फर्जी मतदाताहरु तयार गरियो । चुनाव सम्पन्न भई सकेपछि पनि कति मत खस्यो ? भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएन ।
विनामुचुल्का मतगणना शुरु गरियो । बहालवाला निर्वाचित जनप्रतिनिधि जापानको प्रतिनिधि बनेर मतदान गरेको घटनासहित नेपाल फर्किसकेका सैयौं व्यक्तिहरुलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गरी योजनावद्ध ढंगले मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराइयो । यी सबै अनियमतिताहरुलाई सहँदै, मेरो छाती ठूलो बनाउंदै, विभिन्न कानूनी प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि म एनआरएनएको बृहत्तर हितका लागि अस्वभाविक भएपनि प्रक्रिया स्वीकार्दै भविष्यमा पनि निरन्तर रुपमा क्रियाशिल हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
सचिवालयको अनियमितता देखेर दुःख लाग्यो । संधै सबै कामहरु रातरात अनियमित रुपले अगाडि बढाइयो । सदस्यता रजिस्ट्रेशनमा चरम अनियमितता गरिएको जगजाहेर गर्न चाहन्छु । नियमसंगत हुनुपर्ने कामहरुमा पनि अनुनय विनय गर्नुपर्ने अवस्था आयो
सबै एनआरएनहरुलाई समेट्ने गरी बलियो गैर आवासीय नेपाली संघ बनाउन मैले जोड दिंदै आएको छु । यो अभियानमा मलाई साथ र समर्थन दिनु हुने सबै मित्रहरु तथा अग्रजहरू प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । हाम्रो तर्फबाट केही कमी, कमजोरी भएको भए साथीहरुसंग क्षमायाचना गर्दछु । आगामी दिनमा पनि तपाई सबै साथीहरुको यसैगरी माया र सहयोग पाइरहने विश्वास लिएको छु ।
संघको केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित मेरा मित्र कुमार पन्तलगायत सम्पूर्ण निर्वाचित साथीहरुलाई हार्दिक बधाई दिंदै सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु । मेरो टिममा रहेर मेरो चुनावी अभियानमा सघाउनु हुने मेरा परिवारजन, युके तथा संसारभरीका मित्रहरु र सीमित श्रोत साधनका बावजुद दिनरात खट्नु हुने नेपालस्थित साथीहरुप्रति म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु ।
मिति : १८ अक्टोबर २०१९ काठमाडौँ
फलामखानीमा चट्याङ लागेर ६ जना घाइते
फागुन ७ ।पर्वत,पर्वतको गाबिसको वडा नम्बर ४ रुपेस्वाँरा स्थित फलामखानीमा चट्याङ लागेर ६ जना घाइते भएका छन् […]
जयश्री पुलमा डाइभर्सन निर्माण सुरु, साँझसम्ममा एकतर्फी सवारी चल्ने
साउन १२ । कावासोती, बढी भारका कारण भाँच्चिएको नवलपरासीको गैँडाकोटस्थित जयश्री पुलको दक्षिणतर्फबाट वैकल्पिक […]
नेकपाले प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षको टुंगो लगायो,कुन प्रदेशमा को ? (सूचिसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश संगठन कमिटीका […]
बौलाहा घोडाले मानिसहरुलाई जथाभावी टोक्दा गौराहामा त्रास
वैशाख १ । रौतहट,रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा बौलाहा घोडाले केही दिनदेखि सर्वसाधारणलाई टोक्न थालेपछि याहाको […]